Banyere Anyị - Shenzhen Soro Electronics Co., Ltd.
Shenzhen Soro Electronics Co., Ltd.Bụ a elu-tech enterprise ọkachamara na ike electronics ngwaahịa mmepe na mmepụta. E guzobere ụlọ ọrụ anyị na 2006 na isi obodo a na-edebanye aha nke 5,010,0000 RMB, mpaghara mmepụta 20,000 mita mita na ndị ọrụ 350.
Companylọ ọrụ anyị agafeela akwụkwọ nchịkwa njikwa IS09001, IS014001 usoro njikwa usoro gburugburu ebe obibi, OHSAS18001 nchekwa nchekwa ọrụ na usoro nlekọta ahụ ike, ngwaahịa anyị agafeela asambodo Thai, ikike nchekwa akwụkwọ, asambodo CE, akwụkwọ TUV CB.
Companylọ ọrụ anyị agafeela usoro njikwa njikwa IS09001, IS014001 usoro njikwa usoro gburugburu ebe obibi, OHSAS18001 nchekwa nchekwa ọrụ na njikwa nlekọta ahụike, ngwaahịa anyị agafeela asambodo Thai, ikike nchekwa akwụkwọ, akwụkwọ CE, akwụkwọ TUV CB. Ndị na-ere ahịa na China Mobile, China Unicom, China Tower, ChinaTelecom, PetroChina na Grid Grid, anyị ebupụkwara Europe, SouthAmerica, Middle East, Africa, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, wdg. Anyị ga-eme ọrụ OEM na ODM maka ndị ahịa anyị, Anyị rube isi na ụkpụrụ nke ibe uru na-enweta aha ọma si ahịa, anyị na-enye zuru okè ọrụ, elu àgwà ngwaahịa na asọmpi ahịa. Obi ụtọ na-anabata anụ ụlọ na oversea ahịa na-akwado anyị iji nweta ihe ịga nke ọma ọnụ.
❐ Ikike nchọpụta: ikike niile nke ngwaahịa anyị.
❐ Ahụmahụ: ọgaranya ahụmahụ na OEM na ODM ọrụ
❐ Akwụkwọ: EC (LVD / EMC), CUL, FCC.OHSAS18001, TUV CB.
❐ Ntụkwasị obi ịdị mma: 100% uka mmepụta ịka nká ule, 100% ihe onwunwe nnyocha, 100% ọrụ ule.
❐ Akwụkwọ ikike ọrụ: otu afọ akwụkwọ ikike oge, Kemgbe Ndụ mgbe-sales ọrụ.
❐ Nye nkwado: enye oru oru na oru oru nkwado na mgbe nile.
❐ Ngalaba R & D: R & D otu gụnyere electronic engineer, bughi engineer na ọdịdị mmebe.
❐ Ngwurugwu nke oge a: elu akpaka mmepụta ngwá ogbako.